Romantic manheru | Ushamwari | Mapeji evaravara ehurukuro
Romantic manheru | ushamwari
Mamwe mapeji ekubatana
Zvepabonde, kukanganisa nekujekesa
Kana mushure mekufambidzana nekubudirira uye chikamu chinotevera chekutengesa kwekutanga, hupenyu hwezuva nezuva hunowedzera kuwedzeresa, nguva dzese dzorudo dzinokosha zvikurukuru. Imwe kana imwe nguva manheru anodikamwa anogona kuita kuti rudo rurege kurara. Asi mazano mashomanana akatova akakwana - kushushikana hakufaniri kubuda.
Nzira yekugadzira manheru emanzwiro edu - kuvaka hukama
Kana paine vana mumba, manheru anodikamwa achiri kugona. Kana iwe uine mukana wekupa vana kumubereki akanaka usiku humwe kana kuti kurega vana vakwegura vavete neshamwari, manheru ano anogona kunakidzwa chaizvo.
Kune vana vaduku, zvisinei, kushayikwa kwomubereki wekuda manheru anodikamwa hakusi kazhinji chinetso. Mushure mezvose, vanoenda kunorara zvakanaka kare, kuitira kuti rudo rwuzogona kupinda mushure mekupedzisira. Saka saka hausi nguva yakawandisa pamugwagwa, iwe unofanirwa kugadzirisa mberi.
Zvisungo zvekuda manheru
Haasi munhu wose ane pfungwa imwechete yekuda. Mimhanzi inofanana uye chiedza chakajeka zvinokosha. Kuti uwane makandulo, iva nechokwadi chokuti hakuna ngozi ye moto. Chimwe chinopa kupa zviedza zvechikafu. Mavheji matsva e LED anopawo chiedza chinononoka, asi hachisi kune munhu wese anofarira.
Pfungwa yakanaka yekuratidzira manheru ndeyekudya kunonaka kwemaviri. Ne candlelight uye girazi rewaini rinokurumidzira rinouya mumhepo yakanaka. Chinyorwa chinonyanya kugadziriswa chinogadzira nokukurumidza kusimba zvakasiyana zvakasiyana pane muupenyu hwezuva nezuva.
Kana iwe usingadi kubika zvimwe, asiwo neusiku unofadza pane sofa yakarurama. Nekudzoka kwemasikati kusina kusimba, chimiro chakanakisisa, chinwiwa chakanaka uye chidiki chiduku, iwe uchawana kutanga kwakanaka mukati manheru manheru. Pasinei nokuti uri kunyunyuta, kutaura, kuteerera mimhanzi kana kutarisa DVD inhau yekuda kwako.
Manheru emasikati pamwe nemumwe wake
Kana mushure mekufambidzana nekubudirira uye chikamu chinotevera chekutengesa kwekutanga, hupenyu hwezuva nezuva hunowedzera kuwedzeresa, nguva dzese dzorudo dzinokosha zvikurukuru.
Saka kuti rudo rwepfungwa rurege kukwira, iwe unofanirwa kudzivisa dzimwe pfungwa. Iwe haufaniri kutaura pamusoro pezvinetso uye kunetseka. Kuzvidzivirirwa hazvirevi kuti unofanira kumira - kune nguva yeiyo pane rimwe zuva.
Kuti kusvoda kusangane nerudo, kufema kwakaipa kunofanira kudziviswa. Saka kudya nekiki kana eikisi hazvifaniri kunge kuri pamenyu. Mune mafungiro akaipa, zvichange zvisiri zvishoma nerudo rwemanheru. Kana izvi zvisingakwanisi nguva, iwe unofanira kuzviendesa zviri nani.
Zvinonyanya kukosha ndezvenguva, kuitira kuti manheru atange kutanga chaizvo rudo uye asina kushungurudzika. Kushanda nguva yakawanda zviri nani kune rimwe zuva.
Uye kana chimwe chinhu chinouya mukati kana chinoshandura mafungiro, haufaniri kuparadza mafungiro. Mukana mutsva wekuda manheru uchadzoka munguva pfupi.
Uye iwe unofarira izvozvo?
Kusiyana kwezera muhukama
Kunyunyuta nemusikana kana shamwari
Ushamwari muurayi - zvinokambaira zvinokuvadza
Ukama hwakanaka hwepabonde
Kubatana - chii chinochinja nevana?
Amai nababa pazororo vasina vana
Nhetembo dzakanaka dzekasikana kana shamwari
Zvokudya zvechikafu zveviri
Dinner yekudya yeviri
Rudo rwemavhiki vhiki
Ko mazita echipfuwo anorevei?
Apo shamwari yakanakisisa inova rudo
Iva mubereki - gara murudo
Kushamba pamwe neshamwari kana musikana
Tora mvura pamwe neshamwari kana shamwari
Kunyengera muupenyu hwezuva nezuva
Zano repabonde kubva kune nyanzvi
Chiedza - Kuita bonhora kuchienda sei?
Kuita bonhora muhukama = utsotsi?
Kuita basa uye zvepabonde
Soulsex - chido chitsva chemudiwa
Mukadzi wechikadzi uye nhema
Kudzokorora pabonde - inofanira kushanda here?
Mashizha ekuvaraidza emadzimaikadzi
Erotic Coloring Map Varume nevakaroorana
Uri kushayikwa nyaya pamusoro pekubatana uye zvepabonde here? Taura nesu.
Manheru akanaka, manheru akanaka - manotsi uye kunyora